Fraport inaugurates new passenger terminal in Ljubljana | Airport news
Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny dia any Eropa • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Vaovao momba ny dia any Slovenia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Teknolojia fitsangatsanganana • Travel Wire News
Fraport dia nitokana ny tobin'ny mpandeha vaovao any Ljubljana
Home » Lahatsoratra » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Fraport dia nitokana ny tobin'ny mpandeha vaovao any Ljubljana
Fraport dia nanambola € 21 tapitrisa € tao amin'ny terminal farany maoderina izay mametraka tsara ny seranam-piaramanidina Ljubljana hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany.
Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 16 Jona ny fiantsonan'ny mpandeha vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Ljubljana any Slovenia.
Hisy terminal vaovao hisokatra ho an'ny fifamoivoizana ataon'ireo mpandeha manomboka ny 1 Jolay.
Fraport dia namorona fotodrafitrasa maoderina izay misy velarana 10,000 metatra toradroa ho an'ny asa malefaka sy ny fampitomboana ny serivisy.
Tamin'ny 16 Jona, Fraport Slovenija - a Fraport AG orinasa - nanokana tamin'ny fomba ofisialy ny tobin'ny mpandeha vaovao tao Seranam-piaramanidina Ljubljana any Slovenia. Fraport dia nanambola € 21 tapitrisa € tao amin'ny terminal farany maoderina izay mametraka tsara ny seranam-piaramanidina Ljubljana hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany. Afaka roa taona eo ho eo ny asa fanamboarana dia hisokatra ho an'ny fifamoivoizana ny mpandeha manomboka ny 1 Jolay.
Niresaka nandritra ny lanonana fanokanana ny mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka ao amin'ny Fraport AG, Dr. Pierre Dominique Prümm: "Matoky izahay fa hanamafy ny toerana misy ny seranam-piaramanidina Ljubljana ao amin'ny faritra sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny terminal. Ity terminal ity dia tandindon'ny firosoana amin'ny ho avy vaovao. ” Ny talen'ny fitantanana Fraport Slovenija, Zmago Skobir dia nanampy hoe: "Vonona izahay amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fifamoivoizana, miaraka amin'ny ambiansy terminal vaovao sy ny fanomezana manintona ho an'ireo mpandeha sy mpiara-miombon'antoka aminay."
Fraport dia namorona fotodrafitrasa maoderina izay misy velarana 10,000 metatra toradroa ho an'ny asa malefaka sy ny fampitomboana ny serivisy. Ny fahaizan'ny terminal an'i Ljubljana dia nitombo avo roa heny nanompo mpandeha 1,200 1,200 isan'ora. Miaraka amin'ny toerana sy fiononana bebe kokoa, ny terminal dia hisafidy fivarotana, trano fisakafoanana ary kojakoja maro hafa - miaraka amin'ny XNUMX metatra toradroa azo amidy amin'ny voalohany. Dr. Prümm dia nanambara: "Raha fintinina, ity terminal miorina amin'ny mpanjifa ity dia hanatsara ny traikefa amin'ny dia amin'ny seranam-piaramanidina Ljubljana."
Na eo aza ny fotoan-tsasatra sarotra, Fraport dia nahavita tamim-pahombiazana ny fanamboarana ny terminal tamin'ny fotoana sy teti-bola. Nanamafy koa i Dr Prümm fa vonona ara-potoana ny terminal ho fanombohana ny filohan'ny filankevitry ny vondrona eropeana mandritra ny enim-bolana i Slovenia amin'ny fiandohan'ny volana jolay - rehefa eo amin'ny sehatra afovoany eropeana i Ljubljana mandray ireo mpitsidika avy amin'ny renivohitra eropeana hafa.
Ny fanoloran-tenan'i Fraport amin'ny seranam-piaramanidina Ljubljana dia mihoatra ny fananganana tobin'ny mpandeha vaovao. Hatramin'ny nanombohan'i Fraport Slovenija nitantana ny seranam-piaramanidina Ljubljana tamin'ny 2014, dia nametraka vola mihoatra ny € 60 tapitrisa € ho an'ny fotodrafitrasa vaovao i Fraport, toy ny Fraport Aviation Academy, tobin-tsolika vaovao ary ny tobim-piantsonana vaovao. Ho fanampin'izay, Fraport dia mijery akaiky ny mety ho fivoaran'ny entana sy ny seranam-piaramanidina eo akaikin'ny seranam-piaramanidina. Hanomboka tsy ho ela eo amin'ny sehatry ny angovo avy amin'ny masoandro ho an'ny seranam-piaramanidina ny fananganana - ampahany amin'ny hetsiky ny toetrandro sy ny tontolo iainana ao amin'ny Fraport Group any Slovenia sy manerantany.